သစ်ခက်သံလွင် ကဗျာသုံးသပ်ချက်၊ ကိုနိုင်း ၏ "အိမ်အလွမ်းကဗျာများကိုဖတ်ကြည့်ခြင်း"
on July 08, 2017 သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍ - Articles myat hlaing
ပြတင်းတံခါးအဖွင့် ဇာခန်းဆီးအလွင့်( ၁၉ )
ကျနော့်အိမ်ကလေးရဲ့ပြတင်းတံခါးကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ ပြတင်းတံခါးအဖွင့်မှာကာထားတဲ့ ဇာခန်းဆီးကို အသာဖယ်ပြီး လောကကြီးကို မျှော်ငေးပြီးကြည့်နေမိပါတယ်။ ကျနော့်အတွေးတွေဟာ ငြိမ်သက်စွာ လွင့်မျောသွားကြပါတယ်။ ခပ်လှမ်းလှမ်းဆီမှာလှမ်းမြင်နေရတဲ့ အိမ်ကလေးတွေ၊ အိမ်ကလေး တွေပေါင်းလိုက်ရင် မြို့ရွာတွေပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒီမြို့ရွာတွေ ပေါင်းလိုက်ရင် တိုင်းပြည်တပြည်ပေါ့။
ဘာပဲပြောပြော ဒါက မိသားစုတွေရဲ့ပေါင်းစည်းမှုတခု။ ကျေးလက် တောရွာတရွာ၊မြို့တမြို့၊ တိုင်းပြည်တခုမှာ စုပေါင်းနေထိုင်ကြတဲ့ မိသားစုကြီးတခုပေါ့။ ကျနော်တွေးမိလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ဇွန်လ Family Life မဂ္ဂဇင်းထဲက ကဗျာဆရာနရီ (မြိတ်) ရဲ့ မိသားစု တိုင်းပြည် ကဗျာကို ဖတ်လိုက်မိပါတယ်။
အဖေ့စကား တသွေးတသံ တမိန့်ဆိုလျှင်ဖြင့်
အမေနဲ့ကျနော်တို့ ခမျာ၊ ဦးတည်ရာ လိုက်နာရုံပေါ့
(၅၅၀) နိပါတ်တွေထဲက ဆောင်ရန်ရှောင်ရန် လူမှုရေးအဘိဓမ္မာ
တစိတ်တဝမ်းမှ မကွဲလေနဲ့၊ ကိုယ့်တိုင်းပြည် ကိုယ့်ဧရာဝတီ
မြန်မာကို ကမ္ဘာက ဦးညွတ်စေမယ်
သားနဲ့သမီးတွေ သူတလူ ငါတမင်းဖြစ်ဖြစ်နေက
ကံကိုချည်း အားမကိုးလေနဲ့၊ ဉာဏ်အသိနဲ့စိတ်ဖြာစေချင်ပေါ့
အပြုံးတွေ ပြုံးကြစို့ တို့မိသားစုတိုင်းပြည်။
ကဗျာလေးရဲ့အသံကိုနားထောင်လိုက်ရတာ ချိုမြနေတယ်။ ဒီကဗျာထဲကလို ကျနော်တို့တိုင်းပြည် မှာ နေထိုင်နေကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားညီအကို၊မောင်နှမတွေ စိတ်ဝမ်းမကွဲမပြားပဲ အစဉ်အမြဲနေထိုင်နိုင်ခဲ့မယ် ဆိုရင်၊ အတိတ်ဆိုးတွေရှိခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးလို့တွေးမိရင်း ကုန်လွန်သွားခဲ့တဲ့ ကာလပေါင်းများစွာကိုနှမျော တသနေမိတယ်။ ကျနော်တို့ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကာလတွေက အကြောင်းတွေ ကို ပြန်မတွေးမိချင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့လည်း မတွေးပဲနဲ့လည်းနေလို့မရနိုင်ပါဘူး။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့၊ ကောင်းသည်ဖြစ်စေ၊ ဆိုးသည်ဖြစ်စေ မေ့ဖျောက်ပစ်လို့မရတဲ့ သမိုင်းစာမျက်နှာတွေပါပဲ။ တခါက အတိတ်ကိုပြန်တွေးရင်း စိတ်တွေနွေလယ်ည လို ပူလောင်လာပါတယ်။ ဗြူတီမဂ္ဂဇင်း ထဲက ကဗျာဆရာ နေမျိုး ရဲ့ နွေလယ်ည ကို ဖတ်မိလိုက်ပြန်ပါ တယ်။
ကဗျာဆရာနေမျိုးရဲ့ကဗျာကိုဖတ်ရင်း ကျနော်တို့ရဲ့ငယ်စဉ်အခါက လူငယ်ဘဝတွေကိုပြန်စဉ်းစားမိလိုက် တယ်။ လမ်းပေါ်မှာ လမ်း ကြိတ်စက်က အမှောင်ထဲမှာရပ်လို့” ဆိုတဲ့ မြင်ကွင်းလေးကိုပြန် မြင်မိပါတယ်။ အမှောင်၊ ငြိမ်သက်စွာရပ်နေတဲ့လမ်းကြိတ်စက်၊ လမ်းမဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပိုပိုပြီးမှောင်လာ၊ အမှောင်ထုကြီးက ပိတ်ဆီးနေတယ်။ ကျနော်တို့လူငယ်ဘဝတွေဟာ ပိန်းပိတ်အောင် မှောင်နေတဲ့ နွေလယ်ညတွေကို လမ်းလျှောက်ခဲ့ရသလိုပါပဲ။ ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း အိပ်နေတဲ့ မြင်းတကောင် သေးပေါက်ချ ထားသလို နံ့စော်နေခဲ့တယ်လေ။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ကျနော်တို့လူငယ်ဘဝ တွေဟာ ပလူကောင်တွေလို ကာလပေါင်းများစွာကို စတေးခဲ့ရပါတယ်။ အတ်ိတ်ကို ပြန် မတွေးချင်တော့။ ဒီလိုနဲ့ အခုအချိန်မှာ အတွေးကိုပြန်တွေးမိလိုက်ပြန်တော့ ရုပ်ရှင်တေးကဗျာမဂ္ဂဇင်း ထဲ က ဆရာတင်ညွန့်မြိုင် (သာစည်) ရဲ့ ၂၄ နာရီပြင်ပ ကိုရောက် သွားမိပြန်ပါတယ်။
သမိုင်းစာမျက်နှာတွေ မျက်နှာကောင်းပါ့မလား ….တဲ့
လွှတ်တော်အသံ ပြည်သူ့အသံ ….တဲ့
ကဲ၊ ကဗျာဆရာပြောတဲ့အတိုင်းဆို ဒီနေ့လည်း အိမ်ကိုလွမ်းနေရဦးမယ်ပေါ့။ ရှေ့ကိုလျှောက်ချင်ပေမယ့် နေလုံးကြီးက နောက် ပြန်လှည့်နေပြီလေ။ နောက်ကိုပဲပြန်ရောက်နေမှာပါပဲ။ ဒီလိုဖြစ်နေတာကလည်း လွှတ်တော်အသံ ပြည်သူ့အသံတွေက ဒီခေတ်ရဲ့သမိုင်း စာမျက်နှာလိုရေးနေ ပါပြီ။ ဒီခေတ်က အိပ်မက်ထဲကမနိုးထနိုင်သေးပါဘူး။ အိပ်မက်ထဲက အရေးတော်ပုံကို ပြန်မက်နေတာပါပဲ။
ကဗျာဆရာကပြောသလို အိမ်အပြင်မှာရောက်နေရတာ ၂၄ နာရီတဲ့။ ကျနော်တို့လည်း အိမ်အပြင်ရောက် နေပေမယ့် အိပ်မက်ထဲမှာ လမ်းလျှောက်သလိုလျှောက်နေခဲ့ရတာ ၂၄ နာရီကြာခဲ့ပါပြီ။ နောက်ထပ်လည်း ၂၄ နာရီပေါင်းများစွာ။ အိမ်ကိုပြန်ချင်လှပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ အိမ်ပြန်တဲ့အခါ သမိုင်းတော့ လှစေချင်ပါတယ်။ မိသားစုကို သမိုင်းလှလှလေးလက်ဆောင်ပေးချင်ပါတယ်။ ပြောမယ်ဆိုရင် အချစ်တွေ တပုံကြီးယူသွားပြီး လက်ဆောင်ပေးချင်ပါတယ်။ မြို့ကြီးတမြို့လုံးတောင် လက်ဆောင်အဖြစ် သယ်ဆောင် သွားချင်ပါတယ်။ ဇွန်လထုတ် မိုးမခမဂ္ဂဇင်းထဲက ဆရာမောင်ကြူးရင့်ရဲ့ အချစ်မြို့ကဗျာ ကိုဖတ်ရင်း စိတ်ကူးယဉ်လိုက်မိ ပါတယ်။
ဒါပါပဲ၊ ရောမမြို့ကြီးဟာ တနေ့တည်း တည်ဆောက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်း သိနေခဲ့ကြ ပါတယ်။ ကျနော်တို့လည်း တနေ့နေ့တော့အိမ်ပြန်ကြရမှာပါပဲ။ အိမ်ပြန်ရောက်ချိန်မှာ သမိုင်းလှလှလေး လက်ဆောင်ပါသွားချင်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ အိမ်ကိုလွမ်းနေရဦးမှာပေါ့။
၁။ နရီ(မြိတ်)၊ မိသားစုတိုင်းပြည်၊ Family Life မဂ္ဂဇင်း၊ ဇွန်လ ၂၀၁၇။
၂။ နေမျိုး၊ နွေလယ်ည၊ ဗြူတီမဂ္ဂဇင်း၊ ဇွန်လ ၂၀၁၇။
၃။ တင်ညွန့်မြိုင်(သာစည်)၊ ၂၄ နာရီပြင်ပ၊ ရုပ်ရှင်တေးကဗျာမဂ္ဂဇင်း၊ ဇူလိုင်လ ၂၀၁၇။
၄။ မောင်ကြူးရင့်၊ အချစ်မြို့၊ မိုးမခမဂ္ဂဇင်း၊ ဇွန်လ ၂၀၁၇။
သူရိယနေဝန်းဂျာနယ်၊ Vol 1. No 155. 8 July .2017